February 15, 2022 AdminLeaveaComment on ५ मिनेटको ३ सम्म चार्ज लिन्छु ! चा”हाना हुनेले सम्पर्क गर्नुस !
सुस्मा कार्की नाम नसुन्ने त सायद कमै होलान नेपाली फि’ल्म क्षेत्रका फ्या’नहरु ।पछिल्लो समय उनी निकै च’र्चामा छिन । उनले धेरै फि’ल्म र म्युजिक भिडियो मा अभिनय गरिसकेकी छिन । एक अन्तर्वार्तामा उनलाइ ५ मि’नेटडान्स गरेको कती पैसा लिनु हुन्छ भन्दा उनले ३ लाख सम्म लिन्छु भन्ने जवाफ दिइन नेपाली मिडियामा बेला बेला च’र्चामा आइरहने नाम हो सुस्मा कार्की ।
नायिका कार्की ब्ल’कबस्टर चल’चित्र लु’ट’को एउटा आ’इटम गित ‘उध्रेको चोली’ गीतमा आइ’टम नित्य’ गरेर च’र्चामा आएकी थिइन् ।सुस्मालाई दर्शकले नायिका भन्दा पनि आइट’म ग;’र्लको रुपमा रुचाउछन् । उनले बि”न्दास, बिन्दा”स २,बा”उन्सर, लु”ट र सा”लि कस्को भेनाको लगा’यत च”लचित्रमा अ’भिनय गरिसकेकी छिन् ।
शनिबार रा’ति प्राई’म ‘टाई’म्स टेलिभिजन’बाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्र’कार ऋ’षि ध’मलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आफूलाई सल’मान खानबाहेक अरु को’ही’पनि मन नपर्ने स्पष्ट पारिन् । हेर्नुहोस भिडियो
भाडाको निहुँमा घरबेटिले बिरामी आमा र ८ महिनाको छोरिलाई निकाले
श्रीमानकाले मेरो प्या’स मेटाउनै सकेन, यो जोवन कसरी कटाउनु